०	भोलि हुने तेस्रो चरणको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मुलुकले नयाा प्रधानमन्त्री पाउनेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
०	एमाले राष्ट्रिय सहमति नबनेसम्म तटस्थ बस्ने भएपछि मधेसवादी दलको समर्थन तपाईंहरूलाई भयो भने मात्र मुलुकले नयाा प्रधानमन्त्री पाउाछ । निणर्ायक शक्तिको रूपमा देखापरेका मधेसवादी दलले अघि सारेका मुद्दाहरूप्रति तपाईंहरूको धारणाले मधेसवादी दलले तपाईंहरूलाई सहयोग गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
०	एमालेबाट तपाईंहरूलाई समर्थन पाउने विषयमा केही छलफल भएको छ ?
०	बहुमतीय खेलबाट बन्ने सरकारले मुलुकको मुख्य कार्यभार शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ त ?
०	सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले सेनामा नयाा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुल्यो भनिन्छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
०	चौतर्फीरूपमा तपाईंको पार्टीमाथि आक्रमण हुन थालेको देखिन्छ, अस्ति मात्र पनि राज्यसमिति स्तरका वाइसिएल नेताको हत्या भएको छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
०	तपाईंहरूले घरजग्गा फिर्ता र समायोजन हुने जनमुखी सेनाको संख्या नतोकेर सहमति हुन नसकेको अन्य दलको आरोप छ नि ?
०	अनमिनले शान्ति र प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन साठी हप्ते कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि, अनमिनले माओवादीको पक्ष लियो भन्ने सरकारवादी दलहरूको आरोप छ नि ?
०	तपाईं सभासद् समेत हुनुभएको नाताले थपिएको समयमा संविधान बन्छ भनेर जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
०	मुलुक पुनर्संरचनाको अवस्थामा छ, यहीबीचमा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न नहुने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ, यस विषयमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बााडफााड समितिको सभापतिको हैसियतले केही बताइदिनुस् न